တရုတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - WFOE လုံးလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားရေးလုပ်ငန်း
တရုတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - တစ် WFOE ဖွဲ့စည်း
တရုတ်မကြာသေးမီကထည့်သွင်းဖို့အရာနှင့်အတူတစ်ဦးလူကြိုက်များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမြောက်အမေရိကနှင့်ဥရောပကနေအတော်များများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအနိမ့်အလုပ်သမားနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတစ်ဦးကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်မနိမ့်ဆုံးအရာ၏, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာထည့်သွင်းသူတို့အဘို့တရုတ်ကကမ်းလှမ်းအမျိုးမျိုးသောအကြိုးကြေးဇူးမြား၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများဖွဲ့စည်းရန်ဤဒေသတွင််၏ဆည်းကပ်ကြသည်။ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာလူကြိုက်များထဲဆွဲသွင်းပါဝင်မဟာဗျူဟာကဒီမှာဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သောပိုင်ဆိုင်လုံးလုံးနိုင်ငံခြားရေး Entity (WFOE) ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်ကိုလည်းမကြာခဏမှားယွင်းစွာတစ် WOFE အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
အဆိုပါ WFOE တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာထဲမှာကုမ္ပဏီတည်ထောင်နေသည် ရှန်ဟိုင်းလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးဇုန်။ သငျသညျအထကျ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦး WFOE အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထည့်သွင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ
တရုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျမှမိမိတို့ကမ်းခြေဖို့လာမယ့်ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးနီးပါးအမျိုးအစားများကိုမှဖော်ရွေသောဒေသအဖြစ်လူသိများသည်။ အစိုးရခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူလိုက်ရန်လိုပေမည်စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအပေါ်အနည်းငယ်ကန့်သတ်ရှိပါတယ်။
တဦးတည်းရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်, ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေသတွင်းခရီးသွားလာရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးဘယ်နေရာကနေမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဒီအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
တဦးတည်းရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်တရုတ်ကို အသုံးပြု. ၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတရုတ်တစ်ဦးနေထိုင်သူညွှန်ကြားရေးမှူးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ခန့်အပ်ခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ အချို့သောအခြားတရားစီရင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဤအချက်သည်လည်းပိုမိုမြန်ဆန်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပေးဆောင်သောပုံမှန်ကော်ပိုရိတ်အခွန် 25% ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး, မိဘကုမ္ပဏီအပေါ်အခွန်ရှောင်အခွန် 10% ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အခွန်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်, သို့သော်အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကမတန်တဆကိုရှာဖွေကြဘူး, ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအားဖြင့်လက်ခံရရှိအခြားအကျိုးကျေးဇူးများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပုံမှန်အားတတ်နိုင်သည်။
တစ်ဦးကတရုတ်နေထိုင်သူမန်နေဂျာ, ဒါမှမဟုတ်နေထိုင်သူဖက်ကိုလည်းဆွဲသွင်းပါဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဘို့မလိုအပ်ပါ။ တရုတ်အတွက်ဒီလိုအပ်ချက်ဖျက်သိမ်းရေးအသုံးပြုပုံထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပုံမှန်အားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးရိုးရှင်းပြီးထိရောက်သည်။
ဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးစေရန်, ရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများ၏နိမ့်ဆုံးအရေအတွက် WFOE စာရင်းဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်လိုအပ်ချက်များကိုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ကြပြီးကုမ္ပဏီများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အခြားသူများအား privacy ကိုတစ်ဦးအခြို့သောဘွဲ့ဆက်ကပ်။ သို့သော်တရုတ်ပြည်သူ့စံချိန်အပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်သောဤအချက်အလက်များ၏စာရင်းကိုစောင့်ရှောက်တတ်ပေမယ့်အများပြည်သူစံချိန်များအတွက် shared နှင့်မှတ်တမ်းတင်ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးအခြို့သောပစ္စည်းများအနည်းငယ်မျှသာရှိပါသည်။
တရုတ်တွင်, Multi-ငွေကြေးဘဏ်စာရင်းကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှရရှိနိုင်ပါမည်သည့်ငွေကြေးခုနှစ်တွင်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်ပြည့်စုံငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာလုပ်ဖို့စွမ်းရည်သိသိသာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျိုးစုံငွေကြေးအတွက်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့နိုင်စွမ်း၏တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထည့်သွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တိုးလာနေပါတယ်။
တစ်ဦး WFOE အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထည့်သွင်း & တစ်ဦးက Business လိုင်စင်ရရှိရန်မည်သို့
တစ်ဦး WFOE အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထည့်သွင်းဖို့, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထည့်သွင်းဖို့, ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်ကရှိပြီးသားကော်ပိုရိတ် entity ကြောင်း၎င်း၏နေအိမ်ဒေသဆန္ဒပြပွဲများထံမှလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုသရုပ်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒီနဲ့အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်းအထောက်အထား, အ entity ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး၎င်း၏နေအိမ်တိုင်းပြည်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဘဏ္ဍာရေးစွမ်းရည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်အတန်း၏မူလလက်မှတ်သို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်မှတ်ပုံတင်မည်တစ် notarized မိတ္တူ။
ကုမ္ပဏီ၏အကောင့် status ကိုအဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရဲ့အကောင့်အခြေအနေထုတ်ဖော်ပြသသောကုမ္ပဏီရဲ့ဘဏ်ထဲကနေတစ်ဦးကစာတစ်စောင်။
စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖော်ပြတစ်ဦးကစာရွက်စာတမ်းလက်ရှိမှုများလုပ်ဆောင်ကိုလည်းတရုတ်အတွင်းကိုလိုက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သည်အခြားကုမ္ပဏီစာရွက်စာတမ်းများလည်းဘရိုရှာ, ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်, ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကဲ့သို့ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့လိုအပ်သည်။ ဤအကုမ္ပဏီစာရွက်စာတမ်းအတော်များများကတရုတ်ဘာသာပြန်ထားသောနှင့်တင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တရုတ်အတွက် WFOE ဖွဲ့စည်းများ၏ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမကြာခဏတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖြစ် entity လုပ်ရပ်ရှိသည်ဖို့အထူးရည်ရွယ်ချက်ကုမ္ပဏီဖန်တီးပါ။ တကယ်တော့ဤလုပ်ငန်းစဉ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကော်ပိုရိတ်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိသောသူတို့အားဤရွေးချယ်မှုအရပျကိုယူမြင်နေမှလုံးဝအသုံးဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ သို့တိုင်, ဤတရုတ်အားပြိုင်မှုကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းကြောင်းကိုအမှန်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်တည်ရှိကြောင်းသေချာပါလိမ့်မယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အခွန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းကတည်းကအတော်များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟောင်ကောင်ကုမ္ပဏီများဤအမျိုးအစားများကိုဖွဲ့စည်းရန်
ကုမ္ပဏီများကအဆိုပြုထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း concept ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသရုပ်ပြတစ်ဦးကစာရွက်စာတမ်း။ ဒါဟာခြေလှမ်းကိုပထမဦးဆုံးနှစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်နှင့်ဘတ်ဂျက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောရုံးခန်းငှားရမ်းအဖြစ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်ကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်သောငှားရမ်းခွင့်, အားလုံးအတှကျသဘောတူညီချက်များ, ထောက်ပံ့ရပါမည်။
လစာနှင့်အကျိုးအမြတ်၏တစ်ဦးကဘတ်ဂျက်။ ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သောဝန်ထမ်းများအတွက်လစာနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးနှင့်တရုတ်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် တွဲဖက်. လုပ်ကိုင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းများကိုအားလုံးသည်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်တရုတ်ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများစီးပွားရေး၏အထွေထွေအယူအဆနှင့် operating နည်းဗျူဟာသည်အဘယ်အရာပေါ်တွင် မူတည်. လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအချို့အမျိုးအစားများကိုအခြားသူများထက် ပို. စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသည်။
အသစ်တစ်ခုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့အခွင့်ပြုချက်ရယူအများအားဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ကြီးမားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်ဘယ်မှာပေါ် မူတည်. နှစ်ခုမှငါးလအထိကြာနိုင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖိုးအခအချို့သည်အဖြစ်ကောင်းစွာတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဒေသအားဖြင့်ဒေသအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။